တိကျသော Shaft အစိတ်အပိုင်းများ - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
အစိတ်အပိုင်းများသည် စက်ကိုဖွဲ့စည်းသည့် အခြေခံဒြပ်စင်များဖြစ်ပြီး စက်နှင့်စက်ကို ခွဲထုတ်နိုင်သော သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများသည် စက်ကိရိယာအမျိုးမျိုးရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကို သုတေသနနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းအတွက် စည်းကမ်းတစ်ခုသာမက အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ယေဘူယျဝေါဟာရတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကို သုတေသနနှင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ယေဘုယျအသုံးအနှုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် အပိုင်းများ၏ တိကျသောအကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်-
1. အစိတ်အပိုင်းများ (အစိတ်အပိုင်းများ) ဆက်သွယ်မှု။ ချည်ကြိုးချိတ်ဆက်မှု၊ သပ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ပင်ချိတ်ဆက်မှု၊ သော့ချိတ်ဆက်မှု၊ spline ချိတ်ဆက်မှု၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု အံဝင်ခွင်ကျချိတ်ဆက်မှု၊ elastic လက်စွပ်ချိတ်ဆက်မှု၊ သံမှိုတက်မှု၊ ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် ကော်ပတ်ခြင်းစသည့်
2. ခါးပတ်ဒရိုက်၊ ပွတ်တိုက်မှုဘီးဒရိုက်၊ သော့ဒရိုက်၊ ဟာမိုနီဒရိုက်၊ ဂီယာဒရိုက်၊ ကြိုးဒရိုက်၊ ဝက်အူဒရိုက်နှင့် ရွေ့လျားမှုနှင့် စွမ်းအင်တို့ကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် အခြားစက်ဒရိုက်ဗ်များအပြင် ဒရိုက်ရှပ်များ၊ အချိတ်အဆက်များ၊ ဘရိတ်များနှင့် ဘရိတ်များကဲ့သို့သော သက်ဆိုင်ရာ shafting သုညများ (အပိုင်း။
3. ဝက်ဝံများ၊ ဗီဒိုများနှင့် ခြေစွပ်များကဲ့သို့သော အထောက်အကူပြု အစိတ်အပိုင်းများ (အစိတ်အပိုင်းများ)။
4. ချောဆီစနစ် နှင့် တံဆိပ် စသည်တို့ကို ချောဆီပေးခြင်း။
5. အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများ (Parts) များဖြစ်သော စမ်းများ။ စည်းကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်၊ အစိတ်အပိုင်းများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းမှအစပြုကာ အခြေခံ အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ အသုံးချမှုများ၊ ကျရှုံးမှုမုဒ်များ၊ ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်နှင့် အမျိုးမျိုးသော အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ၏ ဒီဇိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာရန် အမျိုးမျိုးသောဆက်စပ်ပညာရပ်များ၏ ရလဒ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုပါသည်။ ဒီဇိုင်းအခြေခံ အစိတ်အပိုင်းများ၊ နည်းစနစ်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များ သီအိုရီများကို လေ့လာပြီး လက်တွေ့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ဘာသာရပ်၏ သီအိုရီစနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ စက်ပစ္စည်းများ၏ သုတေသနနှင့် ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးကြီးသော အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာသည်။
စက်ယန္တရားများ ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ရှိလာသည်။ သို့သော် စည်းကမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ပုံနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ခွဲခြားထားသည်။ စက်ယန္တရားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ဒီဇိုင်းသီအိုရီများနှင့် နည်းစနစ်အသစ်များ၊ ပစ္စည်းအသစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သစ်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ finite element method၊ fracture mechanics၊ elastohydrodynamic lubrication၊ optimization design၊ reliability design၊ computer-aided design (CAD)၊ solid modeling (Pro၊ Ug၊ Solidworks စသည်ဖြင့်) ကဲ့သို့သော သီအိုရီများ)၊ system analysis and design methodology သည် သုတေသနအတွက် တဖြည်းဖြည်း နှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ဒီဇိုင်း။ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံ၏ ပေါင်းစပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ မက်ခရိုနှင့် မိုက်ခရို ပေါင်းစပ်မှု၊ အခြေခံမူများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်များ ရှာဖွေရေး၊ တက်ကြွသော ဒီဇိုင်းနှင့် ဒီဇိုင်းအသုံးပြုမှု၊ အီလက်ထရွန်နစ်ကွန်ပြူတာအသုံးပြုမှုနှင့် ဒီဇိုင်းသီအိုရီများနှင့် နည်းစနစ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့သည် အရေးကြီးသော ခေတ်ရေစီးကြောင်းများဖြစ်သည်။ ဤစည်းကမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်၊
Surface roughness သည် အစိတ်အပိုင်း၏ မျက်နှာပြင်၏ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း ဂျီဩမေတြီ ပုံသဏ္ဍာန်အမှားကို ထင်ဟပ်စေသည့် အရေးကြီးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်း၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အဓိကအခြေခံဖြစ်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ မရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ ထုတ်ကုန်၏ အရည်အသွေး၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ ၏ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုကို ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းသုံးသွယ် ဖြစ်သည့် တွက်နည်း၊ စမ်းသပ်နည်း နှင့် နှိုင်းယှဉ်မှု နည်းလမ်းတို့ ဖြစ်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဒီဇိုင်းတွင် ရိုးရှင်းသော၊ လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်မှုရှိသော ဥပမာကို အသုံးများသည်။ သရုပ်ဖော်ပုံအသုံးပြုမှုတွင် လုံလောက်သော ရည်ညွှန်းပစ္စည်းများ လိုအပ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော ရှိပြီးသား စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းလက်စွဲစာအုပ်များသည် ပိုမိုပြည့်စုံသော ပစ္စည်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် အသုံးများသည်မှာ သည်းခံနိုင်မှုအဆင့်နှင့် ကိုက်ညီသော မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုဖြစ်သည်။ သာမန်အခြေအနေများတွင်၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ အတိုင်းအတာခံနိုင်ရည်လိုအပ်ချက်များ သေးငယ်လေ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုတန်ဖိုးသည် သေးငယ်လေဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့ကြားတွင် ပုံသေလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အချို့သောစက်များ၊ တူရိယာများ၊ လက်ကိုင်ဘီးများ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများနှင့် အစားအသောက်စက်များတွင် လက်ကိုင်များသည် အချို့သောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ မျက်နှာပြင်များကို ချောမွေ့စွာ စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ မျက်နှာပြင် ကြမ်းတမ်းမှုမှာ အလွန်မြင့်မားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ အတိုင်းအတာ ခံနိုင်ရည်မှာ အလွန်လိုအပ်ပါသည်။ နိမ့်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အတိုင်းအတာသည်းခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုတန်ဖိုးကြားတွင် အချို့သောစာပေးစာယူတစ်ခုရှိသည်။